Ngụkọta akụ na ụba 55mm pitch gpu mining chassis
Nke a bụ igwe na-egwuputa ihe nke kacha dị ọnụ ahịa ugbu a.Ọ na-anabata bọọdụ isi otu, yana oghere oghere kaadị bụ 55mm.Igwe nkesa ike na-enye ike nke onwe maka kaadị eserese.Atọ 4700RPM dị elu ndị na-agba ọsọ ọsọ na nnukwu oghere na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enwe oke ọkụ ọkụ, nke nwere ike hụ na arụ ọrụ nke igwe na-arụ ọrụ mgbe ị na-ebelata oriri ike, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, biko kpọtụrụ anyị.
1. The ethereum chassis na-eji B85 isi njikwa chipset, Integrated motherboard, PCIE nke ala, nnukwu bandwit, na ike ndakọrịta.
2. Igwe na-egwuputa ihe na-arụ ọrụ ike nke 1800W dị elu, nke na-enye ọkụ siri ike maka igwe ngwuputa gị.
4. A na-akwado kaadị eserese ọkpụkpụ nke igwe na-egwuputa ihe iche iche iji belata ibu nke motherboard, belata ihe ize ndụ nke mmebi motherboard, ma mee ka kaadị eserese na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo ndụ.
5. Ngwuputa chassis nke na-egwuputa ihe nwere 3 otu ọwa ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ maka ikpo ọkụ ọkụ, yana nnukwu oghere na-eme ka mmanụ aṅụ na-ekpo ọkụ.Onye ofufe nwere ndụ ọrụ nke awa 50,000 yana oriri ike dị obere ka 6W.
6. Nke a 8-kaadị miner nwere a 55mm ndịna-emeputa kaadị oghere pitch, nke bụ dakọtara na ọtụtụ ndịna-emeputa kaadị na ahịa.
7. A na-eme shei nke igwe na-egwuputa ihe nke 1mm nke galvanized oyi na-atụ nchara ígwè.
Onye ofufe jụrụ oyi
Biko zipu ajụjụ ma ọ bụ iwu gị, anyị ga-eji obi gị dum jeere gị ozi.
WhatsApp: + 86-13018277227
WhatsApp: + 86-13411961308
1. Ngwaahịa gị nwere ike iburu LOGO onye ahịa?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM, mana enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ọnụọgụ, biko kpọtụrụ ndị ọrụ anyị maka nkọwa.
2. Kedu ka ị si ekwe nkwa ịdị mma?
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ahịrị mmepụta ọkachamara.N'ime usoro mmepụta nke igwe ọ bụla, anyị na-agbaso ụkpụrụ ụkpụrụ mmepụta ihe dị mkpa.Mgbe emechara mmepụta ahụ, a ga-enyocha igwe ọ bụla tupu ebupu ya iji hụ na enwere ike iji igwe ọ bụla ị nyere iwu mee ihe.Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwere ike izitere gị vidiyo nlele.
3. Kedu ka m ga-esi nweta katalọgụ ngwaahịa ọhụrụ na ndepụta ọnụahịa gị?
Biko nye anyị ozi kọntaktị gị (dịka email, Whatsapp, WeChat, wdg), anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa iri na abụọ.ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị maka inweta ọnụahịa ahụ, biko kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị na email gị, anyị ga-ebute ụzọ ịza ajụjụ gị.
Nke gara aga: Igwe ihe ngwuputa 65mm 8gpu kacha ewu ewu
Osote: Igwe Ngwuputa IDC 4U6 kaadị chassis ọkọlọtọ
Motherboard Ejikọtara / 8 kaadị / PCIE / oghere 55mm
Ịnye ọkụ 2U: 1800W
Ogologo kaadị nkwado 290 mm
Ụdọ ike eserese 6Pin na 8Pin Nwanyị (6+2 Pin)
3 Fan (DN12cm) 4700RPM
Ihu ihu interface
oghere kaadị TF N/A
Ike SW N/A
AC interface N/A
Ihe eserese kaadị ibu LED N/A
Voltaji na-arụ ọrụ
Okpomọkụ 0-40 ℃
Weta nke gi
iru mmiri 55% RH-95% RH, enweghị condensig
OS Linux / MinerOS
Nha chassis 630mm(L)*400mm(W)*170mm(H)
Nha ngwugwu Haziri dị ka ụdị ụgbọ njem / ihe nlele / nkwakọ ngwaahịa pallet
Igwe na-egwuputa ihe bụ ngwaahịa ahaziri iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ.O nwere ụfọdụ njirimara pụrụ iche.A ga-edozi ọnụahịa ahụ na mgbanwe nke ahịa.Biko gosi na anyị tupu ikwado usoro a.
Ngwuputa igwe chassis na 55mm spacing na f ...
Kacha ọnụ-irè 55mm pitch 8 kaadị eth m ...